Ebee ka Wesley nọ? Ihe ịga nke ọma SXSW na obere mmefu ego | Martech Zone
na SXSW na nso nso a, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-anọdụ na ime ụlọ na-ajụ onwe ha, Kedu ihe kpatara na anyị enwetaghị traction ọ bụla na SXSW? Ọtụtụ na-eche ọbụna ma ọ bụrụ na nnukwu ego ha mefuru bụ naanị ihe efu. Dị ka mecca maka ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka teknụzụ, ọ bụ ebe zuru oke maka ịmatakwu otu akara, mana gịnị kpatara ọtụtụ ụlọ ọrụ ji daa na nnọkọ nnukwu teknụzụ a?
Ndekọ ọnụ ọgụgụ maka SXSW mmekọrịta 2016
Ndị Na-emekọ Mkparịta ụka: 37,660 (site na 82 mba ọzọ)
Oge mmemme mmekọrịta: 1377
Mmekọrịta Ndị Na-eme Mkparịta ụka: 3,093
Interactive Media na endbịa: 3,493
Ọ bụrụ na ịgabeghị SXSW, ka m sere gị foto. Chee echiche banyere ozi spam niile na oku oku ị na-enweta. Ugbu a nye onye ọ bụla ahụ nke anụ ahụ. Wee tinye onye ọ bụla n’ime ndị ahụ n’ebe ọ bụla na nzuzo ọ bụla n’ime na n’ime Austin Convention Center. Enwere ọtụtụ ndị na-ebugharị ngwaahịa na ọ dị mfe ndị bịara ya ka nsogbu niile.
Nke a bụ ihe anyị na-emegide:
Guzosie ike ụdị na-abịa SXSW kwa afọ, na afọ a bụ nke mbụ anyị.
Ndị ụlọ ọrụ nwere nnukwu ego iji mefuo ụzọ ha iji nwee ihe ịga nke ọma, yana dịka aha anyị na-egosi, anyị adịghị ọnụ ala.
Iguzo n'etiti igwe mmadu ndi mmadu na-agbali iguzo.
Na-ewetara gị ndị mmadụ, kama nke ọzọ?
Ndi otu ahia anyi n’enweputara atumatu. Dị ka Frank Underwood na-ekwu, Ọ bụrụ na ọ masịghị etu esi edozi tebụl, tụgharịa okpokoro ahụ. Kama ịchụ nta ndị mmadụ, ma rịọ maka nlebara anya ha, ka anyị bịakwute anyị. Anyị achọghị ịmanye ha ka ha chọta anyị, anyị chọrọ ka ha chọọ ịchọta anyị. Nke ahụ bụ ebe ebe echiche Wesley batara.
Atụmatụ; n'ihi na m na-eji ejiji dị ka Waldo (ma ọ bụ Wally ma ọ bụrụ na ị bụghị si US)
Nyefee Kupọns onye ọ bụla nke matara na m bụ agwa
Ọ bụrụ na ha sere m ma jiri akara hashtag #NCSXSW, ha ga-abanyekwa iji merie otu Amazon Echos ise.
Otu izu tupu SXSW anyị dere blog post na-ahapụ ndị ọrụ anyị niile na nkwalite. Wayzọ a ndị ahịa anyị na-eguzosi ike n’ihe maara nke ọma ihe ha ga-eme maka ihe mgbata n’ọsọ
Ndị na-agụghị blọgụ post ahụ nwere ike isonye ma ọ bụrụ na ha dakwasịrị m, wee kpọọ m
Ọ dị mkpa ịgụpụta ubi ahụ, ọ bụghị naanị igwu egwuregwu ahụ.
Ọ rụpụtara nke ọma. Anyị nwedịrị mgbe anyị nwere ọmarịcha ihu ọma. Fewbọchị ole na ole tupu ememme ahụ amalite, Seth Rogen kwupụtara ọrụ ọhụụ ya: ihe omume dị ebe ihe nkiri Waldo dị. Ndị ahịa ha mejuru ebe ahụ na akwụkwọ mmado Waldo. Akara! Ihe ọzọ dabara nke ọma bụ m merie lọtrị iji hụ Onye isi ala Barack Obama. E debere m n’elu ụlọ nke mbụ n’ebe a na-ahụ anya nke ukwuu. Ihe abụọ ndị a mere ka anyị hụkwuo ụzọ.
Ozugbo anyị matara na anyị nwere ozi dị mma, anyị gosipụtara mgbasa ozi ahụ na Mgbasa ozi.
Atụmatụ ahụ anyị nwere nyere aka ọbụna karịa. Anyị zụtara mgbasa ozi ezubere iche na nzacha ebe maka mpaghara Austin na Facebook na Twitter. Ekwesiri m ike bipụta ihe ogwe / oge m na-aga ka ndị ọrụ anyị wee nwee ike dịrị m mfe. Nke a mekwara ka m hụ ndị na-ege ntị nwere mmasị na teknụzụ weebụsaịtị. M megharịrị ebe - ọtụtụ. Nke a mere ka mmadụ nwekwuo ohere ịhụ m. Ekwesiri m ike ịga n'ọtụtụ nnọkọ gọọmentị na ndị nkịtị. Na nke ikpe azu, oburu na enwetara m otu uwe ahu… KWA. AHING YBỌCH..
Ọ bụ ibu fun, ma na-agwụ ike. Agaghị m akwado ụdị ahịa ahịa a na onye ọ bụla anaghị enwe obi ụtọ ịgwa ndị mmadụ okwu nwere ike isiri ha ike ịrahụ ụra. Ma, enwere m obi ụtọ, enwere m mmasị izute ndị mmadụ na obere ụmụ m abụọ azụọla m ọrụ nke ịrụ ọrụ na obere ụra. Ihe ozo bu na Director nke Social Media na Namecheap, kama ọ bụ naanị ihu mara mma nke ụlọ ọrụ PR nyere, enwere m ike ịkọ ihe omimi banyere ụlọ ọrụ ahụ na otu anyị chọrọ isi mepụta mmekọrịta ndị ahịa. Nke a mere ka anyị nwee mmekọrịta ọhụrụ na ịnata nzaghachi bara uru banyere otu ndị mmadụ si were anyị dị ka ụlọ ọrụ.
Maka ebumnuche ndị a niile, ọ bụ ọfụma na-erughị eru, mana na ịlele ọnụọgụgụ ọ bụrụkwa ọganiihu ọnụọgụgụ. Naanị na Twitter anyị nwetara ihe karịrị nde 4.1 - site na mgbasa ozi anyị kachasị nke ọma ruo taa. Gwọ ime nkwalite a ruru $ 5,000.
Ọ bụghị ihe ọjọọ maka SXSW mbụ anyị.
Anyị amatabeghị ka anyị ga-esi gbanye tebụl n'afọ na-esote, mana ka ọ dị ugbu a, anyị ga-ewulite mmata nke anyị nwetara na SXSW Interactive nke afọ a.
Tags: 2016barack obamammefu egoeziokwu underwoodogbako ahiaahasxswMmekọrịta SXSWMmekọrịta SXSW 2016ebee ka waldo diebee wesleymkpụrụ okwu
Iwekota Shopify Seamlessly na gị WordPress Site